Semalt: Ahoana no ahafantarana ny tetik'ady SEO Black Hatao
Black hat SEO dia fombafomba ampiasaintsika hanatsarana ny laharan'ny tranokala amin'ny motera . Manitsakitsaka ny fepetra sy ny fepetra ao amin'ny Google, Bing, ary Yahoo. Ny SEO dia fotopototra ary manampy anao hanana fahatokisana kokoa amin'ny aterineto.
Ity teny ity dia avy amin'ny horonan-tsary Hollywood mba hanavaka ny tsara sy ny ratsy fanahy. Ireo olon-dratsy dia nampiasaina nanao kapa mainty, raha ny olona tsara kosa no nanao kapa fotsy.
Michael Brown, manam-pahaizana manokana avy amin'ny Semalt , dia nanamafy fa vao haingana, ny mainty hoditra SEO dia lasa olana lehibe ho an'ny webmasters. Ampiasaina amin'ny hackers sy spammers amin'ny ordinatera izany. Amin'ny alalan'ity dingana ity, dia mamorona olana ho an'ny tompon'ny tranonkala izy ireo, manangona ny fitaovanao ary manao hetsika tsy mendrika ety anaty aterineto na ivelan'ny aterineto.
Zava-dehibe ny mahatakatra fa ny fametrahana ny teknolojia SEO sy ny paikady mainty hoditra dia mety hahatonga ny tranokalanao voarara amin'ny valin'ny fikarohana. Izany no antony tokony hahatongavanao fifamoivozana avo lenta sy hifantohana amin'ny paikady fotsy SEO fotsiny.
Fampidirana ny Black Hat SEO
Black hato SEO dia teknika iray izay tsy ankasitrahan'ny milina fikarohana ary mbola ampiasain'ireo webmasters maro hanatsarana ny laharan-kevitr'izy ireo. Ireo fanao ireo dia tsy mifanaraka amin'ny fepetra sy ny fepetra ao amin'ny Google, Yahoo, ary Bing ary tsy afaka manome antoka ny valin'ny faniriana mandritra ny androm-piainany. Maro ny soso-kevitra sy hevitra napetraka mba hisakanana ireo webmasters amin'ny fampiasana SEO mainty hoditra. Tokony hanara-maso ny Google's Guides amin'ny Webmaster, ny toro-làlana webmaster an'ny Bing, ary ny toro-làlana webmaster an'ny Yahoo mba hahafantarana ny dikan'ny black hat SEO sy ny fomba hanafoanana izany. Tokony hialanao karama fikarohana hikarakarana ny tranokalanao amin'ny aterineto.
Ny fomba hahafantarana ny tetika mainty SEO
Ny fomba amam-panao SEO mahazatra indrindra azo ampiasaina mba hamantarana ireo fomba amam-panao SEO anao dia duplicate ny votoaty, lahatsoratra automation, pejy vavahadin-tserasera, rohy miafina sy lahatsoratra fanamarihana, famolavolana tenimiafina, SEO ratsy, mitatitra ny mpifaninana aminao tsy misy antony, fanakanana, rohy fampifandraisan-davitra, famoahana tsy misy valiny, ary fanodikodinam-pikambana. Ankoatra izany, tsy tokony handevona ny lahatsoratrao ianao, aza mifidy tranonkala fifandraisana, kodiarana mifamadika, ary toeram-pambolena mifandraika, ary aza misoroka marika maromaro mihintsy. Nambara fa voarara ny fitaovam-pikarohana ny fimailo ny fanehoan-kevitra, ny fangatahana fanamafisana amin'ny Google, ny famoronana dom-pianakaviana an-tsokosoko, ary ny famoronana pejy misy ahiahy. Tsy tokony handray anjara amin'ny hetsika tahaka ny virosy, phishing, malware, ary ny trangan-javatra ianao satria ireo rehetra ireo dia anisan'ny fotsy hoditra SEO.
Mitatitra ny mainty SEO SEO
Raha tafiditra amin'io asa io ianao dia tsy hahazo ny vokatra irinao. Ary raha mahita olon-kafa tafiditra ao anaty kapa mainty SEO ianao dia azonao atao ny mitatitra izany. Raha tsy mitatitra ianao, ny tranonkalanao dia mety ho voasakantsakana amin'ny alàlan'ireo haino aman-jery mahatsiravina, fanentanana SEO, ary ny rohy spamming. Noho izany, zava-dehibe ny mitatitra amin'ny Google mba ahazoana antoka ny fahitsin'ny tranokalanao amin'ny aterineto.
Tokony handao ny SEO mainty ve ianao?
Marina fa ny SEO mainty hoditra dia nahazo ny toerana misy anao tsara indrindra amin'ny valin'ny fikarohana, saingy fomba fanao tsy ara-dalàna izany ary mety ho voarara mandritra ny androm-piainanao ny tranokala. Hisy fahombiazana amin'ny fotoana fohy rehefa mihamitombo ny fifamoivoizanao, saingy mampihatra sazy sazy ho an'ireo tranonkala toy izany i Google, ary mety tsy ho vitanao ny miatrika ny vokany mahatsiravina. Midika izany fa ny teknolojia mainty SEO dia tsy mety aminao raha toa ianao ka matoky momba ny fitantanana ny orinasa mandritra ny androm-piainany Source .